Munamato Kumiririra Zviroto Panguva Yekutakura | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Munamato Kumiririra Zviroto Zvakashata Panguva Yepamuviri
Nhasi tichave tichidhinha minamato kupesana nezviroto zvakashata panguva yekuzvitakura. Kana mukadzi ane nhumbu, iyo ndiyo nhanho yekutanga pakuwedzera sezvakarairwa naMwari. Nekudaro, zvinhu zvakawanda zvinoitika mudenga remweya panguva iyoyo kana mwana achiri mudumbu.
Kune dzakawanda kurwiwa uye kurwiswa kunoitika kumukadzi kana ave nepamuviri. Iwe uchave uchishamisika nei iyo iyo hondo inowanzo kumuka kune vakadzi vane pamuviri, ndizvo, imhaka yekuti nhumbu inoburitsa mhuri munzvimbo yekuzadzikiswa. Zvakare, mwana wese anotakura chikomborero kubva kuna Mwari Wemasimbaose uye vese vanoitwa chikomborero kuchizvarwa chavo, ichi ndicho chikonzero nei kurwiswa uye kurwiswa kunowanzo simuka kumukadzi ane nhumbu.
Izvo zvakafanira kuziva ndezvekuti kazhinji, kurwa uye kurwiswa hazvisi zvinopesana nemukadzi ane nhumbu asi pamwana. Nekudaro, kurwa kunova iko kwemukadzi ane nhumbu nekuti ndiye mudziyo.
Imwe yemafomu ehondo anorwira mukadzi ane pamuviri kurota kwakaipa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zviroto zviitiko zvemweya uye nzvimbo yemweya inodzora yeyenyama. Chinhu chero chipi zvacho chakagadziriswa munzvimbo yemweya chinouya kuzoratidzwa munyika chairo. Nekudaro, zvakashata kwazvo kuti mukadzi ane nhumbu awane zviroto zvakashata panguva yekuzvitakura.
Kana mukadzi ane nhumbu akatanga kuona zvakaipa muzviroto, ndiko kuzivikanwa kuri pachena kuti hondo iri kuuya. Bhaibheri rinoti takarwa nenyama neropa asi nemasimba nemasimba vatongi venzvimbo dzine rima. Nekudaro, hazvina kukwana kungorerutsa zviroto paatari zvekungoerekana zvangoitika nekuti hazviite zvinoreva zvakananga kwauri. Kana zvikasanzwisisika kwauri icho ndicho chimwe chikonzero nei uchifanira kunamata.
Kune vana amai vazhinji nhasi vanga vasina hanya vachiri nepamuviri uye muvengi akashandisa izvo kuba chinhu chakakura muhupenyu hwevana vavo. Vamwe vana vakazvarwa vasina rukudzo nekuti vabereki vavo vanoratidza kuregeredza munzvimbo yekunamatira panguva yepamuviri pavo. Chero iwe paunowona chimwe chinhu chisinga wedzere muhope nezve mwana wako asati aberekwa, zvakakosha kuti unamate uchipesana nazvo.
Enzaniso Dzakarota Zviroto Panguva Yekusununguka
Kuona Ropa Muchiroto: Izvi zvinogona kureva kuita zvisizvo, Unofanira kuzviramba kuburikidza neminamato
Kuona Iwe pachako uchicheka nyama: Izvi zvinogona kuva chiratidzo chekuti uchiri kuberekwa, Unofanira kuzviramba kuburikidza neminamato
Zviso zvisina kujairika kana zvakajairika zvinoita rudo kwauri muchiroto: Izvi zvinoreva kusvibiswa kwedhimoni, iwe unofanirwa kunamata uchipesana nazvo.
Mumwe munhu Anokutevera muhope
Mamwe mafomu eImahusiku
Iyi mienzaniso haina kuitirwa kuti ikuvhunduse iwe kana kukurisa dhiabhori, hapana kana zvinyorwa zvekumashure zvinotsigira chero zveizvi zviroto asi ivo vanowana kubva kune zvakawanda zvakaitika kuvanhu avo vanga vari mubatiri wemaroto aSatani. Saamai vane nhumbu, iwe unofanirwa kuve nekukoshesa zvomweya, kana Dhiabhori achikuratidza chero hope dzisingazivikanwe, simuka uzvirambe nekutenda kuburikidza neminamato. Rangarira rugwaro runoti kuramba dhiabhori uye huchatiza, une simba rakavanzika muzita raJesu. Paunotanga kuve nezviroto zvakashata panguva yekuzvitakura, nekuda kwemwana wako asati aberekwa, taura munamato uyu kakawanda kusvikira kubatwa kwese kwerima pamusoro pemuchero wechibereko chako kwaputswa.
Ishe Mwari, ndinokutendai nekuda kweichi chiitiko chakanaka chawave kundiita kuti ndidarike, ndinotenda netsitsi dzenyu pamusoro pehupenyu hwangu, zita renyu ngarisimudzwe muzita raJesu.
Baba vari kuDenga, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndirote hope, ndinokutendai nekuti kunozadzisa zvivimbiso zvenyu kwamakatiitira mubhuku raMabasa baba ndinosimudzira zita renyu dzvene muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokutendai nekuti hamuna kuchengeta chakavanzika chemuvengi pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokutendai nekuona kwamakandipa kuti ndione hurongwa uye hurongwa hwemuvengi hwehupenyu hwangu Tenzi ndinokukudzai nekuti muchaparadza hurongwa hwavo pamusoro pehupenyu hwangu uye nhumbu muzita raJesu.
Ishe, ndinouya muzita remwanakomana anodiwa Jesu Kristu uye ndinonamata kuti zviroto zvese zvakashata uye zvakazarurirwa maererano nemuchero wechibereko changu zviparadzwe muzita raJesu.
Baba ishe, nekuti zvakanyorwa kuti vana inhaka yaMwari, ishe, chibereko chedumbu rangu inhaka yako, chipo chekunaka kubva kuchigaro cheushe chetsitsi, ngakurege kuva nechakaipa chakaitika muzita raJesu.
Ishe Mwari, Bhaibheri rinoti ndiani anotaura uye zvinoitika kana Wemasimbaose asina kudaira? Ishe ndinonamata kuti musatendera kuti zano iri rizadzikiswe pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ini ndinouya kuzopesana ne simba roga roga iro rakapika kuti richagara richigadzira kutya mumoyo mangu nekuunza kwandiri zvakaipa zviroto, ndinoparadza simba rakadai muzita raJesu.
Ishe Mwari sekureva kwamashoko ako mubhuku raZvirevo 3vs 24 kuti kana ndarara handingatya uye hope dzangu dzichava dzakanaka, ini ndinogashira simba rekurara kunotapira muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinofukidza chibereko chedumbu rangu neropa renyu rinokosha, ngazvirege kukuvadzwa muzita raJesu.
Bhaibheri rinoti hapana chombo chinorwisa isu chinobudirira, Ishe museve wese wakapfurwa pamwana wangu asati aberekwa kubva kuhope dzinopiswa muzita raJesu.
Ishe Jesu, ini pandinovhara ziso rangu muhope, ndinokumbira kuti mweya wako mutsvene nesimba vanditungamire uye ivo vanovhara mukova vachipokana nehunyengeri hwese hwakashata hunogona kuda kusvibisa kurara kwangu nezviroto zvakashata muzita raJesu.
Ishe Mwari, ini ndinomira pamusoro pevimbiso yemazwi enyu anoti vana vangu neni tiri zviratidzo nezvishamiso. Ishe, kusvibiswa kwese kwakaipa kwekurota panguva yekuzvitakura kunopedzwa muzita raJesu.
Ishe Mwari, Bhaibheri rinoti ndisati ndakuumba mudumbu ndakakuziva usati waberekwa ndakakusarudza; Ndakakugadza kuti uve muporofita kumarudzi. Nenzira imwecheteyo, wakaziva mwana wangu kunyangwe mudumbu. Ishe, ndinonamata kuti muVadzivirire nesimba renyu rinoshamisa kuti hapana chakaipa kubva muchiroto chingaitika kwaari muzita raJesu.
Ishe Mwari, pachezvangu ndinonamata nesimba rekunamata, ndinonamata nesimba renyu Tenzi kukunda muhondo yega yega inogona kumuka pandiri muchiroto, Ishe ndibhurayei simba renyu rekunamata muzita raJesu.
Baba ishe, ndinokutendai nekuda kwechipo ichi chamuri kupa nyika iri kuuya kuburikidza neni, ndinotenda nemoyo munyoro pamusoro pehupenyu hwangu, zita renyu ngarisimudzwe muzita raJesu.
Previous nyayaMinamato Pamusoro Pouroyi naJezebheri
inoteveraMinamato Pamusoro Peshanje Uye godo
Minyengetero minomwe yekunamatira Imba Yako
Emmanuel Kurume 21, 2021 Pa 4: 55 am
Ndokumbirawo unamatire mukadzi wangu kuti aponese kubereka mwana wake asati azvarwa kana nguva yakwana, Iye ndi Mai kuropafadza emmanuel Akpan Andrew pazasi pane kero yangu yeGmail ndinokutendai uye Mwari akuropafadzei mose amen
Nguyễn Thị Ngọc Thảo Chikunguru 3, 2021 Na3: 52 pm
Tôi rất biết ơn về sự hướng dẫn cầu nguyện thật tuyệt vời và đây là sự hướng dẫn từ Chúa để tôi được tìm thấy trong lú tầ v cà tàì tếì xin được phép yêu cầu về nhiều bài cầu nguyện bằng tiếng việt hoàn chỉnh và 1 bài cho chồng tôi bằng tiếng Hungary hoặc Tiếng anh, tôi thật sự rất biết ơn, xin Chụ ban Ameni
Minamato Yekuti Uve Chikwereti Chemahara
50 Vhesi dzeBhaibheri pamusoro pehupenyu